Ahoana ny fomba hiverenan'ny rindran-kira amin'ny 2019?
Ny fangatahana eo amin'ny rohy dia mbola iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra mba hanangonana sira mifandraika amin'ny sehatra ary hanatsara ny fikajan'ny tranonkala. Amin'ny alalan'ny fangatahan'ny rohy, afaka manangana rohy ivelany ianao amin'ny fampiasana ny votoatiny ankehitriny ao amin'ny tranokalanao. Ny fiverenana dia fomba tena tsara hanorenana ny marikao sy hanatsara ny fahatsapany. Ny olana tokana dia maro ny tompon-tranonkala manana fomba ratsy hampiarahana ny fanorenana. Adinon'izy ireo ny mampiditra tranokala hafa ankoatra ny azy manokana, mampifanaraka azy ireo ary nahoana no hahasoa ity tompon'ny tranonkala ity.
Ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fampiasana rohy hanatsarana ny fanentanana fananganana rohy. Misy karazana fangatahana rohy hafa ho an'ny backlinks ankoatra ireo izay hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny fomba hiverenana backlinks amin'ny 2019?
Miankina amin'ny fotoana tena manan-danja mila dinihina dia rehefa manatratra ny tranokala; Mila mampifanitsy ny mailaka ianao mba hahitanao ny tranonkala. Ataovy azo antoka fa ny mailaka dia miavaka ary mampiditra ny fampahalalana izay ho ankasitrahan'ny mpamaky. Ilainao ny manao azy manokana amin'ny lohahevitry ny vohikala ary mampiseho ny mpiara-miasa aminao momba ny raharaham-barotra izay efa nifanekenao tamin'ny votoatiny izay napetraka ao amin'ny loharanon-tranonkalany. Ny antsasak'adiny fanampiny dia azonao atao ny manisy fahasamihafana goavana amin'ny valinteny sy vohikala izay mety hanome valiny mahafa-po anao amin'ny fangatahanao. Ilainao ny mitazona izany fanazavana izany ao an-tsainao isaky ny manandrana manorina fifandraisana ara-barotra amin'ny tompona tranokala ianao.
Mangataha rohy mankany amin'ny rohy
Ny fomba tsotra amin'ny fananganana rohy mankany amin'ny faritra misy anao dia amin'ny alalan'ny fangatahana mivantana. Na izany aza, io fomba io dia tsy dia mahomby kokoa noho ny hafa. Mila minitra vitsy monja ny hifandray amin'ny webmaster ary mangataka alalana hamadika azy. Ny vokatr'izany toe-javatra izany dia mety tsy hitovy amin'ny loharanom-baovao tianao te hifanaraka aminy. Ireo tranonkala malaza malaza dia tsy hanaiky ny tolo-kevitr'izy ireo satria manana safidy henjana amin'ny loharanom-baovao izay afaka mamoaka votoaty ao amin'ny pejiny.
Mitady ireo olana amin'ny olana misy ankehitriny momba ny tranonkala
Fomba iray hafa mahira-tsaina kokoa amin'ny famerenana lohan-drakitra amin'ny tranokalanao dia ny famakiana loharanom-baovao iray ary manonona fahadisoana manokana amin'ny mety vahaolana amin'izy ireo. Ity fampahalalana ity dia afaka mitondra lanjany ho an'ny tompona tranokala iray rehefa manampy amin'ny famahana ny olana izay mety tsy fantany akory aza. Raha mampiasa io karazana fangatahana rohy io ianao dia ataovy izay hanomezana maimaim-poana an'ity tranonkala ity. Mahagaga ny miandry hatramin'ny fifandraisana amin'ny mailaka faharoa na fahatelo alohan'ny hanaovana ny fangatahana brochure.
Amin'ny fampiasana ny votoatinao ho loharanom-baovao azo hitanao
Izany fomba fijery mahazatra izany dia mety hahasoa ny tranokalanao. Raha jerena ny tompon'ny bilaogy iray sy ny fanehoan-kevitra momba ny lahatsoratra na ny lahatsoratra tianao hahazoana bakalorea, dia resaka fifampiresahana tsara izany. Ny fomba hafa ahafahana miverin-drakitra dia ny filazana ny lahatsoratra izay hitanao azy ireo, ary avy eo dia atsangano ny lahatsoratra tianao hahazoana rohy. Mila mamaky lahatsoratra ianao ary hijery ireo toerana izay lazainao ny marika dia mety ho ara-dalàna ary hitodika amin'ny natiora. Raha tsy manana rohy izy amin'izao fotoana izao, dia manoro hevitra fa ny tranokalan-tserasera dia mety ho loharano tsara ho an'ity rohy ity Source .